Madaxweynaha Israel oo baajiyey booqasho uu ku tagi lahaa dalalka Ethiopia iyo Ghana – SBC
Madaxweynaha Israel oo baajiyey booqasho uu ku tagi lahaa dalalka Ethiopia iyo Ghana
Madaxweynaha Israel ninka lagu magcaabo Shimcoon Perez ayaa baajiyey booqasho la filayey in uu ku tago dalalka Ethiopia iyo Ghana ee qaaradda Africa, kadib markii ay soo baxeen hanjabaado ku aadan in kooxaha xisbullah iyo Al-qaacidda ay qorsheenayaan weeraro ay ugu aargudi doonaan hogaamiyaha Al-qaacidda Osama Bin Laden iyo taliyihii milateriga ururka xisbullah Cimaad Muqni ee ay sirdoonka yuhuuda ku dileen magaalada Dimishiq ee xarunta dalka Syria.
Shimcoon Perez ayaa la filayey in uu tago dalalkaas isagoo ay booqashadaas ku wehlinayaan wafdi balaaran oo ka kooban laba boqol oo ganacasato Yuhuud ah si loo hagaajiyo heerka xiriirka Israel la leedahay qaaradda Africa islamarkaana loo dhabar jibiyo waxa loogu yeeray awooda ganacsi ay Iran ku leedahay qaaradda Africa.
Booqashadii Madaxweyne Perez ee dalalka Azerbaijan iyo Kazakhstan ayaa ahayd mid si weyn loo adkeeyey amaanka iyadoo ay ku wehliyeen booqashadaas madaxa laanta amaanka Israel ninka lagu magcaabo Yuufaal Diskiin maadaama labada dal ay yihiin dalal xad la leh dalka Iran.
Inkastoo booqashada madaxweynaha Israel ee qaaradda Africa ay mas’uuliyiinta Israel ahmiyad weyn u leedahay balse madaxda diiwaanka madaxweynaha ayaa go’aamiyey in ay baajiyaan safarkaas xilligan.
Xukuumadda Israel ayaa dhambaal u dirtay dlalka Ethiopia iyo Ghana oo ay ku sheegtay in madaxweyne Perez uu daneenayo in booqasho ku tago dalalkaas islamarkaana uu iman doono horaanta sanadka soo socda.
Sidoo kale wasiirka isgaarsiinta Israel ninka lagu magcaabo Mooshee Kaxluun ayaa baajiyey booqasho la filayey in uu ku tago Azerbaijan isagoo hogaaminayo wafdi ka kooban agaasimayaal shirkado isgaarsiin kadib markii ay cadaatay in qarashka ku baxaya ilaaladiisa uu xad dhaaf yahay.
Dublumaasiyiinta safaaradda Israel ee dalka Azerbaijan ayaa ka codsaday xukuumadda Israel in aysan joojin booqasahda wasiirka si aysan saamayn ugu yeelan xiriirka Israel la leedahay Azerbaijan.